Iimbambo kwisosi yebhiya, isityebi kwaye kulula ukuyilungisa. | Ukupheka kweKhitshi
Iimbambo kwisosi yebhiya
UMontse Morote | 18/05/2021 09:00 | Amangenelo ashushu, Ukupheka kwenyama
Iimbambo kwisosi yebhiya. Ngubani ongazithandiyo ezinye iimbambo zehagu? Ewe, ezi ngesosi yebhiya uza kuyithanda kakhulu, sisitya esilula ukusenza kwaye sineziphumo ezibalaseleyo, zilungile, zithambile kwaye zinamanzi kwaye nesosi yokuntywila isonka.
Las Iimbambo zinamanzi kakhulu kunye nenyama enexabiso eliphantsi, yiyo loo nto sinokulungiselela izitya ezilungileyo ngaphandle kokuchitha kakhulu.
LIimbambo zehagu kwi bhiya Sisidlo esinokusilungiselela kwangaphambili, singasilungiselela ukusuka kusuku olunye ukuya kolandelayo, isitya esinokuhamba kunye neetapile eziqhotsiweyo, imifuno, amakhowa….
Enye indlela yokulungisa iimbambo, ngezithako ezimbalwa eziza kuthandwa lusapho lonke.
Ixesha elipheleleyo: 45 m
1 ikhilo yeembambo zehagu
Iigloves ezi-2 zegalikhi
Iti enye yeebhiya 1ml.
Ukulungiselela iimbambo kwisosi yebhiya, kuqala sicoca iimbambo, sizinqumle zibe ziincinci, ixesha kunye nepepile kunye netyuwa.
Epanini siya kongeza i-jet elungileyo yeoyile xa ioyile ishushu, mdaka iimbambo kubushushu obuphezulu, zide zibe mnyama ngombala.
Gweba itswele kunye negalikhi, xa iimbambo ziyigolide dibanisa itswele.
Siyashukumisa kwaye sishiya imizuzu embalwa ukuze yonke into iphekwe kunye kwaye itswele libotshelelwe lilandelwe ngokongeza igalikhi egayiweyo.
Saute yonke into okwemizuzu embalwa, yongeza ibhiya, vumela utywala bunyuke imizuzu embalwa kwaye ugalele iglasi encinci yamanzi, ityuwa encinci kwaye mayipheke malunga nemizuzu engama-30.
Emva kweli xesha sinambitha ityuwa, sijonga ukuba iimbambo zithambile, siyazilungisa kwaye siyacima.
Kwaye bazakulungela ukutya !!!
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Abahlobo » Amangenelo ashushu » Iimbambo kwisosi yebhiya
Iitapile kunye netshizi kunye nebhekoni
Isaladi yeChickpea nesalmon, iavokhado kunye neebhatata